वेपत्ता आयोगले माघसम्म अध्ययन सक्ने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
वेपत्ता आयोगले माघसम्म अध्ययन सक्ने
प्रकाशित मिति २१ कार्तिक २०७५, बुधबार ११:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ५५ जिल्लामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन सकेको छ ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आफन्तको उजुरीका आधारमा आयोगले ती जिल्लामा पुगेर विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णुप्रसाद पाठक जानकारी दिए । तिहार र छठ पर्वपछि आयोगको टोली बर्दिया जाने तयारी गरेको छ । माघसम्म आयोगले सबै उजुरीको विस्तृत अध्ययन गर्ने योजनाका साथ काम गरेको छ ।
विस्तृत अध्ययनका क्रममा आयोगले उजुरीकर्ता, वेपत्ता व्यक्तिको आफन्त, व्यक्ति वेपत्ता पारिनुपूर्वको सूचना, पीडितसँग बकपत्र (को, कहिले, कहाँबाट, कसरी, कसले वेपत्ता पारेको) अध्ययन गरी परिपूर्णका फारामसमेत भराउने काम गर्छ । आयोगमा गत साउन २६ गतेसम्म तीन हजार १९७ उजुरी परेको थियो । उजुरीमा अनुसन्धान गरी आयोगले दुई हजार ५१२ उजुरीमा विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाएको छ ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले विस्तृत अध्ययनका क्रममा आवश्यक परामर्शका लिनका लागि चार जनाको विज्ञ समूह गठन गरेको छ । विज्ञ समूहमा कानुन र न्याय सेवाका पूर्वकर्मचारी छन् । पूर्वसहसचिव कुमोदप्रसाद शर्मा, चन्द्रबहादुर सापकोटा, पूर्वशाखा अधिकृत केदारप्रसाद पोखरेल र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी मुकुन्दप्रसाद अधिकारी विज्ञमा छन् । डा. पाठकका अनुसार विज्ञको समूहसँग आयोगले आवश्यक परेको समयमा परामर्श लिनेछ ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्नका लागि तीन महीना मात्र बाँकी छ । आगामी माघ २७ गते आयोगको समय सकिँदैछ । आयोगले तोकिएको समयभन्दा अगाडि विस्तृत अध्ययन सकेर पीडितसँग सुनुवाइ काम गर्ने तयारी गरेको छ तर आयोगले निर्धारित समयभित्र काम सक्ने देखिँदैन ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ०७१ माघ २७ गते दुई वर्षका लागि गठन गरेको थियो । हालसम्म आयोगको तीन पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । थपिएको समय पनि तीन महीना मात्र बाँकी छ । आयोगले ०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ गतेसम्म वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको मात्र उजुरी लिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओली अहिले महाराजगन्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सल्पान्ट सेन्टरमा उपचार गराईरहेका छन् । उनी…
दाङ । विकासप्रेमी…
गुठीको जग्गा हडप्दै केयू !
काठमाडौं । ०५४ सालमा लोकबाजा संग्रहालयको स्थापना भयो । सम्पदा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त ठाउँको खोजी गर्दै ०५८ सालमा…
रिमा मोटी कि ‘सेउसी’ !
काठमाडाैं । डिभोर्सपछि नेपाल फर्किएर मनोरञ्जन क्षेत्रमा सक्रिय हुने प्रयासमा रहेकी नायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्मा अहिले सामाजिक सञ्जालमा…